आज फुलपाती मनोकामना पूरा गर्न गर्नुहोस् यी काम, के–के को बनाउँने फुलपाती ? [ साइत समेत ]
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » आज फुलपाती मनोकामना पूरा गर्न गर्नुहोस् यी काम, के–के को बनाउँने फुलपाती ? [ साइत समेत ]
काठमाडौ । आजदेखि दशैको विदा सुरु भएको छ । नवरात्रिको सातौं दिन अर्थात् फूलपाती देशभर शक्तिपीठहरुमा पुजाआज हुनेगर्छ। आज घर घरमा फुलपाति भित्राएर मनाउने गरिन्छ ।
घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दशैँ घर अथवा पूजा कोठामा शुभ साइतको प्रतीकका रुपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र मानवृक्ष भित्राउने चलन छ।
असोज २६ गते मङ्गलबार फूलपाती परेको हो । फूलपाती बेलुकीको समयमा गरिने र यसको साइत आवश्यक नपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
फूलपातीकै दिन तुलजा भवानीलाई मूल मन्दिरबाट हनुमानढोकाको मूल चोकमा यात्रा गराइन्छ। मूलचोकमै भवानीलाई साक्षी राखेर महाअष्टमीका दिन राति कालरात्रि पूजासहित राज्यकोतर्फबाट बोका र राँगाको बलि दिइन्छ।
तुलजा भवानी यात्राको साइत बिहान ७ : ११ बजे रहेको छ। तुलजा भवानीलाई बिहान ८ः४४ बजे स्थिरासन गराइन्छ। असोज २७ गते बुधबार महाअष्टमी, त्यसै राति कालरात्रिको पूजा गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।
असोज २८ गते बिहीबार महानवमी पर्व मनाइन्छ। असोज २९ गते शुक्रबार विजयादशमी पर्व परेको छ। घटस्थापनाका दिनदेखि पूजा आराधना गरिने देवीलाई बिहान ८ः १९ बजे विसर्जन गरिने साइत छ।
विजयादशमीका दिन साइत खोजेर टीका लगाउनेका लागि बिहान १०ः०२ बजेको साइत शुभ रहेको छ। टीका लगाउने मानिस पूर्वफर्कनुपर्ने समितिले जनाएको छ। त्यस दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दुर्गा भवानीको प्रसाद लगाउन सकिन्छ।
विजयादशमीका दिन बिहान ७ः०१ बजे तुलजा भवानीलाई मूल चोकबाट मूल मन्दिरमा फिर्ती यात्रा गराइने साइत छ। तुलजा भवानीलाई बिहान ८ः३२ बजे स्थिरासन गराइने साइत पनि समितिले निकालेको छ। खड्गयात्रा पनि यसै दिन गरिने छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन कात्तिक २ गते सबै बलि पूर्ति गरिन्छ। त्यसै रात कोजाग्रत पूर्णिमा पर्व मनाइन्छ।